देशभर गर्मी बढ्दै, मनसुन सक्रिय हुन अझै केही दिन लाग्ने
काठमाडौं, १८ असार । नेपालमा मनसुन प्रवेश गरेको बताइएको १३ दिन बितिसक्दा पनि मनसुन सक्रिय भएको छैन । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले ५ असारमै
इलाम, १८ असार । इलामको देउमाई नगरपालिकाले मिर्गाैला रोगीलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । मिर्गौलाले काम नगर्ने भएर प्रत्यारोपण गराएका बिरामीलाई नगरपालिकाले निर्वाह भत्ता दिने भएको हो ।
मरेको बाघको जुँगा उखेल्नेलाई ५ लाख जरिवाना !
राजापुर, १८ असार । मरेको बाघको जुँगा उखेल्नुलाई परम्परागत नेपाली समाजमा पुरुषार्थ मानिँदैन । तर, वातावरण सचेत आधुनिक राज्यमा त्यो विषय महँगो पर्छ । बर्दिया जिल्ला अदालतले हालैको आफ्नो फैसलामा
के गर्दैछन् एक सातादेखि रुकुमपुर्वमा सभामुख घर्ती ?
रुकुमपुर्व, १८ असार । प्रदेश नं ५ का सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती एक सातादेखि गृहजिल्ला रुकुम(पूर्व)मा व्यस्त छन् । सरकारको कामबाट जनता कति सन्तुष्ट छन् भनेर जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा पुगेर उनी
कावासोती । नवलपरासीमा आज बिहान भएका छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा परी एकको मृत्यु भएको छ भने १२ घाइते भएका छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका–१६ कुमारवर्ती चोकमा लु२ख १४९३ नंको
जुम्ला । प्रसिद्ध चन्दननाथ मन्दिरबाट चोरी भएका मूर्ति अझै भेटिएका छैनन् । २०७३ सालको मङ्सिर १२ गते खलङ्गा बजारस्थित चन्दननाथ मन्दिरबाट मुख्य मानिएको दत्तात्रेयलगायतको २१ थान पुरातात्विक महत्वका मूर्ति चोरी
पूर्व सभासद कार्कीलाई ६ महिना कैद, एक लाख जरिवाना
काठमाडौं , १८ अषाढ । सर्वोच्च अदालतले नेकपाका नेता तथा संविधानसभाका सभासद डिबी कार्कीलाई ६ महिना कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र
काठमाडौं , १८ अषाढ । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले काठमाडौंमा आयोजना हुने भनिएको बलिउडको इन्टरनेशनल इन्डिया फिल्म अवार्ड ९आइफा० कार्यक्रम रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। उक्त अवार्ड समारोह नेपालमा गर्नु
एकै व्यक्तिलाई १२ वटा विषयमा नम्बर थपेर ३ वटा डिग्री दिइयो
काठमाडौं , १८ अषाढ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एकै व्यक्रिलाई १२ वटा विषयमा नम्ब्र थपेर ३ वटा डिग्री (स्नातकोत्तर) को प्रमाणपत्र दिएको पाइएको छ । अख्तियारको नियन्त्रणमा रहेका